Oge Ikpeazụ ịdebanye aha: shopbọchị Ọkara ọkara Echi | Martech Zone
Oge Ikpeazụ ịdebanye aha: shopbọchị Ọkara Ọchịchị Echi
Na-atụ anya ịgwa di na nwunye ezigbo ndị enyi, gụnyere Kyle Lacy, ebe a Indianapolis echi na a omumuihe: Online Social IZIR forTA maka You na gị Business.
Morningtụtụ ga-amalite site na: Kedu ihe kpatara netwọkụ mmekọrịta ji bụrụ ụdị nkwukọrịta siri ike maka azụmaahịa yana netwọkụ mmekọrịta na-akacha mma maka azụmaahịa gị na ebumnuche gị nke Sarah kwuruIntellagirl”Robbins.
Udo na nchekwa - Kedu ụdị nchekwa na nchekwa ị nwere na netwọkụ mmekọrịta?
Nọgide Na-enwe Branddị Gị - Kedụ ka ị ga - esi jigide akara gị na netwọkụ mmekọrịta? Kedu ka ị si eji ya eme ya uwe ojii?
Netwọk mmekọrịta ọha - Otu esi eji netwọk mmekọrịta iji mepụta mkparịta ụka n'etiti ndị ọrụ gị?
Mmetụta Onlinentanetị - Etu esi tụọ mmetụta nke ahịa na mpaghara ịntanetị na gịnị nwere ike ịgwa gị?
Netwọk mmekọrịta na Media ndị ọzọ - Kedu ka ị si ejikọ netwọkụ mmekọrịta na mgbasa ozi mmekọrịta ndị ọzọ?
Aka na Oge - Mepụta netwọkụ mmekọrịta gị na enyemaka nke ndị ọrụ MediaSauce.
Bọchị ga-emechi na mkparịta ụka, Na-agbachitere Aha Gị N'ịntanetị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịdebanye aha, ị ga-enweta ihe kachasị gị na gia!
Video: Sliderocket Beta Na-abịa N’oge Na-adịghị Anya!